Hlala Uphefumlelwe! Ileta eya kubasebenzisana nam-iGeofumadas
Hlala uphefumlelwe! Ileta kubasebenzi bam
Meyi, 2012 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Namhlanje lusuku olukhethekileyo, le mingeni mitsha ithetha ukuba kufuneka ndithathe ithuba elingcono. Kwiveki ndingasayi kuba ngumphathi wakho kwangoko kwaye omnye wenu uya kundiphumelela ukuze izinto zingayeki kwaye ukuze bafumane ubutsha obufunwa lutshintsho. Nangona ndiza kuba lapha, ngokuqinisekileyo ndiza kuba nexesha elincinane lokubabona kuloo mmandla ngokufuthi njengokuba bendisenza ngaphambili.
Ke, ukuze ndingakwenzi xa bengasasebenzisani ngqo nam, ndisebenzisa ithuba lolutsha lwasebusuku ukubhala imigca embalwa ebendikhe ndayikhupha ngaphambili kwiipilisi. Ndiyazi ukuba abanye bazoyifunda kade, kwaye baqonde nokuba ezinye azinako ukubhengezwa ngenxa yokuqaqanjelwa kwam kukungaziwa.
Kuqala, enkosi ngokuthatha uxanduva ngesixa esihle sempumelelo yam. Ngokujonga izimvo ngamanye amaxesha zigeza, ngamanye amaxesha ziyinkohliso, ezinye ziqhelekile njengengqondo eqhelekileyo. Ndiyabulela ngokungandihoyi xa ujonge ukuba amanyathelo am anokuphikiswa, ngokwenziwa kwezinto ezintsha ngokuchasene nentando yam ngokukhuseleka kokwazi ababekwenza ngobunini obukhulu.
Abanye sele bethethile, amaxesha ambalwa kwezi nkqubo zophuhliso zininzi iziphumo ezifunyenwe ngezixhobo ezincinci. Oko kuyabonisa italente emele yona Iqela elizelwe ngabathengisi be-300 abangaphezulu kweedola ze-150 ngenyanga, apho i-32 yaqala yavela khona, ke yi-16 kuphela kwaye ukuya kuthi ga kugqithiso lozinzo ludinga ukuba babe ngabalungileyo 8. Ukubapolisha yayingeloxanduva lwam, ndandingenalo tu uluvo, okunye kwafezekiswa ngokuzingisa kwabo, uqeqesho kunye nothando lwabacebisi abathathu ababeyinxalenye yesimilo sabo, ukufudumala kwabantu kunye nolwazi lobugcisa. Ndiyavuma, abanye babo sele bezise okuninzi kwaye kwakungekho kunqongophala kwabo babengazivumeli ukuba bancedwe okanye kwakunzima kubo ukuqhubeka. Enkosi kubafana ngokungashiyi abafazi abakhulelweyo endleleni, kumantombazana ngokungashiyi iintliziyo ezininzi ezaphukileyo koomasipala.
Kuliwonga kum ukubona into enokubakho ngenye imini endiyibone emehlweni abo ijika yaba zizixhobo abanokuthi ngazo benze izinto ezinkulu kunezethu, ngakumbi ngentlungu encinci. Ngoku bayazi ukuba ngabaphi kubacebisi babo abangasayi kuphinda baphinde, kodwa nayo yonke into abanokuyiphindaphinda kwabo badiniweyo kuba sisiqinisekiso sempumelelo, nokuba bukhona okanye akukho bugcisa bakutshanje.
Nangona kungeyonto yonke ibilula, siyavuma ukuba ulwazi namava afunyenweyo abaluleke kakhulu. Kufuneka ixhaphaze kuba zimbalwa iindlela ezimfutshane zokuyiphumeza ngaphandle kwexesha lendalo lokulinga kunye neempazamo kwaye, ubulumko bethuba elingasoloko liphindaphindwa ngendlela efanayo.
Ke imiyalezo yam yokugqibela, ayiphelelanga kwi-8 yokugqibela kodwa kubo bonke abo bagqibe kule nkqubo nangona befikile ngamathuba:
Yenza konke okusemandleni akho ukuba ungaphulukani nempembelelo yakho kwinto oyenzayo.
Ngethuba lokuqala babenekhadi le-cadastral esandleni sabo, besanuka i-inki yokuprinta. Njengokuba babona ukuba ikhampasi ihambisa amanani ngasemva, njengaxa bechukumisa i-GPS kwaye baqonda ukuba yayingeyiyo iMP3, xa babesenza ikhosi yabo yokuqala kwi-AutoCAD kunye nococeko olulungileyo lwezinto ezibonakalayo kwiMicrostation Geographics. Njengomhla abajongana nawo okokuqala iqela labafundi abatsha, usodolophu owomeleleyo, i-AK47 ehlathini labo baphikisana ne-cadastre. Beka olo thando kuyo yonke into oyenzayo, kunye noburhabaxa bokulinganisa amanqanaba esitishi sonke, ubulali bokubamba intambo yokudibanisaleyo ayenzakalanga, kunjalo-.
Ungayeki ukunqwenela ukuba mncinci kunokuba ngubani okuyalelayo.
Yazi ukuba ungabaxabisa njani abo bakukhuthazayo, bancome ubuchule babanye ukuba babe bakhulu. Yiba nomdla wokufunda into entsha yonke imihla, kwanezo zinto zilula zizisa iziphumo ezilungileyo kobu bomi; njengopelo, ukubhala, ukubhala kakuhle kwesandla, ucwangco, ukusondelelana kosapho, ukufunda, ikofu elungileyo. Ngokukodwa uburharha obuhle kwifomathi ye-UTM, buyinyani njengoko sisenza eZona 16 Norte.
Hlalisa ngokwaneleyo ukuze uhlangabezane neemfuno ezifunwa bubomi.
Yazi indlela yokuxabisa into onayo ekhaya, abantwana bakhula kube kanye.
Uxinzelelo kunye noxinzelelo lwexesha akukho sizathu sokuyeka ukufowuna. Umphathi ovela kumphathi akasoze abuye nokuhleka okulahlekileyo kubusuku bemovie yosapho… nokuba silele embindini webhanyabhanya. Yondla umoya, uxelele abantu ukuba zixabise kangakanani, ukuba kukho imfuneko yokusebenzisa itshizi, yenze kuba umhla wokufa kwakho uya kuba yile nto uya kuyikhumbula.
Fumana uphefumlelwe, ufune, uxabise.
Kwaye ukuba ngenye imini sihlangana kwi cafe, kuya kuba kuhle ukuba sihleke kobu bomi buhamba ngokukhawuleza okukhulu. Ikofu iya kuhlala inencasa, ngokwexabiso laseNueva Frontera, noMaría encedisa ekuphakeleni ukutya.
Ngothando. Don G!
Post edlulileyo«Ngaphambilini Maps Invisibles, icebiso lam ukufunda
Post Next MundoGEO Umagazini ngoku kwiipilisiOkulandelayo »
3 Uphendula athi “Hlala Uphefumlelwe! Ileta eya kubasebenzisana nam "
Iphepha lokugqibela kwidayari… inkalo entsha ene-ajenda enkulu… yiza kwiqabane, uyibonisile… UThixo + ubulumko + ukuthobeka = impumelelo kuphela
Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuzibophelela kokuqhubeka nokufunda nokwenza ngcono yenye yeenjongo zam eziphambili, endibulela kuzo i-pfm kunye neqela labo kunye noogxa babo abathi ngandlel 'ithile bafunda lukhulu.
enkosi don G!
Kulungile, enkosi ngokuxabisa iinzame zethu kule minyaka mi-5 sizamile ukomeleza ii-cadastres, ndiyathemba ukuba siyaqhubeka ngombono omnye ...